Medellín, Kolombià : Manohana Ny Hetsika Fanoherana ny Tolon’Omby ny Governemanta Ao An-Toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 7:23 GMT
(Fanamarihana: lahasoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2007)
Nahitana fiovàna lehibe teo amin'ny tanànan'i Medellín, ao Kolombià tamin'ny taona 2007, teo amin'ny resaka zon'ny biby. Nandritra ny taona maro, nanohana ara-bola ny fety fankalazàna ny tolon'omby isantaona ny governemanta tao an-toerana, fa tamin'io taona io, ary voalohany izao, dia natolotry ny Ben'ny tanàna ho fanohanana ny hetsika manohitra ny tolon'omby ny ampahany amin'ny tetibola mitentina ($6,700 DOLARA eo ho eo) natokana ho an'ny tolon'omby.
Nanasa olona ambony maromaro ilay bilaogera, Jorge Montoya, tao amin'ny fandaharana iray tao amin'ny fampielezampeo fanaony isan-kerinandro mba hiresadresahana momba ny resaka fanoherana ny hetsika tolon'omby ao an-tanànan'i Medellín: i Mauricio Gómez avy ao amin'ny Vondrona Mpiaro ny biby, Defenzoores; Julián Vélez, mpanao gazety ho an'ny El Colombiano ary Jorge Melguizo, mpitantsoratra ao amin'ny birao Monisipaly misahana ny kolontsaina.
Mitatitra vaovao momba ny tolon'omby tao El Colombiano i Julián Vélez ary manohana ilay fetiben'ny tolon'omby ho toy ny mpamokatra tombontsoa ara-toekarena ho an'ilay tanàna no sady loharanon'asa izay vokatry ny fankalazàna isan-taona atao mandritra ny volana Janoary sy Febroary. Manizingizina izy hoe nahazoana mpankafy maro ny tolon'omby taona vitsy lasa izay ary hipoka tanteraka ny kianja “La Macarena” fijerena tolon'omby tamin'ity taona ity, tsy toy ny teo aloha, na teo aza ny fanambaràna mifanohitra amin'izany nataon'ireo mpanaratsy.
Rehefa nanontanianay izy raha mbola vonona ny hanohana ny tolon'omby raha toa ka tsy ny fahafatesan'ilay omby no tanjona, fa kosa ny hifantohantsika amin'ny mozika, fombandrazana, ary ampahany hafa amin'ny fetibe, namaly izy fa tsy te-hanohana izany, satria ny fotoana tena mampientanentana indrindra amin'ny tolon'omby dia ilay dingana telo farany mitondra mankany amin'ny fahafatesan'ilay biby. Manazava ny heviny izy ka nilaza fa ireny biby ireny dia nompiana ary notaizaina hanao tolona eny amin'ny kianja natokana ho amin'izany ary tsy dia mandratra loatra ila biby koa ny tolon'omby tsara omana rehefa omena fanafody “‘endorphines” manala tahotra sy hirifiry izy, na koa “adrenaline” na zavatra simika hafa atondraka amin'ny vatan'ilay omby iray manontolo. Nohamafisiny tsara mihitsy fa voakarakara tsara ireo omby ireo, miaina toy ny mpanjaka izy ireo mandritra ny 4 taona mialoha ny tolona, ary tsy atositosika sy rangitina mihitsy ireo biby ireo mialoha ny andro hiakarany kianja, sy ireo zavatra fanao rehetra mety hampijaly ilay biby mialoha ny fifanatrehan'ilay olona mpitolona sy ilay omby dia tsy ahazoana ny fanohanan'ireo mpankafy.
Nilaza ny antony anohanany ny hetsika manohitra ny hetsika tolon'omby mifototra amin'ilay fandaharanasa “Medellin, ilay anankiray tena nahita fianarana indrindra” ny Sekreteran'ny Kolontsaina ao amin'ny tananan'i Jorgue Melguizo . Nanolotra 15 000 000 (eo amin'ny 6,700 DOLARA eo ho eo) ny fiadidiana ny tanàna mba hanohanana ny hetsik'ireo mpanohitra ny tolon'omby, manohana ny hoe manana fomba fijery samihafa ny mponina satria samihafa ny fomba nanabeazana azy, noho izany afaka mamorona sy mamoaka ny heviny manokana izy ireo. Tsy dia mino loatra izy hoe mety hisy amin'ireo mpankafy tolon'omby hiova hevitra nohon'ny fisian'io fanentanana io, fa ireo izay tsy mbola nanapaka hevitra kosa dia ho afaka handinika ny fanazavan'ireo ankolafy mpanohitra ny hetsika ary afaka hilaza ny toerany izy ireo avy eo raha manohana na manohitra ny tolon'omby. Nilaza ny sekretera fa mbola hanohy hanohana ny tolon'omby ry zareo, nefa kosa te-hampirina ampahany amin'ilay tetibola mba ahafahana manao io fanabeazana io. Naharay imailaka maro avy amin'izao tontolo izao ny Ben'ny tanànan'i Medellin tamin'ny fanohanany ny hetsika fanoherana ny tolon'omby. Nanamarika ihany koa i Melguizo fa lasa nampalaza azy ireo tsy toy ny teo aloha ity hetsika ity: ireo vondrona mpiaro biby manerana ny tany ao amin'ny aterineto. Ho toy ny fanamarihana, dia nitantara ny hagagàny izy momba ny hamaroan'ireo tanora mandeha tongotra moramora milahatra mitazona eo ambanin'ity sorabaventy ity izay misy hevitra mafonja momba ny zon'ny biby, ny fandaminana sy ny faniriana handray anjara amin'io hetsika fanabeazana io.
Novelabelarin'i Mauricio Gómez avy ao amin'ny Defenzoores ireo dingana isan-karazany amin'ny fampijaliana ny biby, izany dia manomboka amin'ny famatorana saina amin'ny vatan'ilay biby mba ho famantarana fa efa mihamanakaiky ny fotoanan'ny fahafatesan'ilay omby lahy, izay matetika ao anatin'ny 15 sy 20 minitra. Nanao fanamarihana izy hoe na efa notaizaina hitolona aza ilay omby, dia tsy ampy fahazarana, kanefa ireo olona mpitolon'omby kosa efa zatra tsara ary manana fomba fiarovana mialohan'ny hiatrehany ilay omby, izay mahatonga ilay tolona tsy hifandanja tsara. Ho fampitahàna, dia notanisainy ny amin'ireo recortadores any amin'ny firenena hafa izay tsy mitondra fitaovana fiadiana miatrika ilay omby, mitsambikimbikina sy mitsingerina manodidina ilay omby lahy fa tsy mamono azy ho solon'ny karazana fampijaliana ireo omby.
Nitaona vahoaka teo an-tanàna ny Defenzoores ny marainan'ny Alakamisy mba hankalaza ny fetibe fanoherana ny tolon'omby, nampiseho horonantsary izy ireo tamin'izany, nanolotra t-shirts, boky ary nitafatafa tamin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpitolona omby sady nanazava tamin'izy ireo ny antony tsy ankasitrahany izany. Haharitra herinandro maro io fankalazàna ny fetibe fanoherana ny tolon'omby io manerana ny tanàna iray manontolo: nampidirin'izy ireo ho ao anatin'ny hetsika voalahatra hataony ihany koa ny lafiny ara-pivavahana. Hangataka famelankeloka amin'i Macarena Virjiny izy ireo, satria mbola ny sariny ihany no entina miteronterona mivezivezy eran'ny kianja alohan'ny hanombohana ny tolona rehetra. Ny hetsika sasany dia any anatin'ireo trano fandihizana malaza amin'ny alina manerana ny tanàna no hatao.
Raha ny fomba fijerin'i Mauricio, voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ireo firenena miisa 8 mankalaza ny fomban-drazana antsoina hoe tolon'omby no nisy governemanta nanohana hetsika fanoherana ny tolon'omby, maro ihany koa ny antony hankalazan'izy ireo izany sy hanolorany ny hery ananany sy ny fomba fiheviny amin'ny olona sisa ao an-tanàna.